Ny fitaovanao OS dia mitazona latsaky ny 10% amin'ny varotra US | Androidsis
Tsy mahagaga raha nandao ny sehatra finday Wear OS, fantatra amin'ny anarana hoe Android Wear, i Google. Nandritra izay roa taona lasa izay. Tamin'ny fotoana nanombohana ny Android Wear tamin'ny voalohany, Google dia toa te-ho lasa benchmark eo amin'ny tsenan'ny Wearables, fa ny mifanohitra amin'izay no nitranga.
Ny hany hetsika mahaliana nanintona ny saina mifandraika amin'ny Android Wear, dia ny fanovana anarana noraisiny volana vitsivitsy lasa izay. Bebe kokoa. Ireo mpamokatra dia tsy afaka nanampy andiana personalization ho an'ny fitaovany, mety ho antony hafa iray antony Vao mainka sarotra ny mahita ny smartwatches tantan'ity rafitra miasa ity.
Ny orinasan-tsaina NDP dia namoaka tatitra izay mampiseho amintsika ny mombamomba ny tsenan'ny entina entina any Etazonia. Mampiseho amintsika izany ny tatitra Ny anjaran'ny tsena Wear OS dia 10% fotsiny, raha ny sisa amin'ireo mpanamboatra, tarihin'i Apple ary arahin'i Samsung sy Fitbit, dia manana anjara 88%. Ny ambiny amin'ny anjarany, 2%, dia zarain'ny mpanamboatra toa an'i Garmin sy Xiaomi.
Araka ity tatitra ity, ny varotra smartwatch amin'ny taona 2018 nitombo 51% raha oharina tamin'ny 2017. Ankoatr'izay, ny fandaniam-bola natokan'ny mpampiasa an'ity karazana fitaovana ity dia nitombo 61% ihany koa, nahatratra 5.000 tapitrisa dolara.
Ny tatitra toy izany dia mifototra amin'ny vinavina sy vinavinan'ny mpandinika indostria, amin'ny ankapobeny matetika izy ireo na dia tsy marina 100% aza ary azo antoka fa misy toerana sasany hampihetsika ny fandikana ireo metatra ireo.
Fa na eo aza ny tombotsoan'ny fisalasalana, ny varotra fitaovana Wear OS tsy maharaka ny fifaninanana izy ireo ary mba hanandramana hanova io fironana io dia takatray izao ny fifanarahana nahatratra ny vondrona Fossil ilay mpikaroka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Ny kaonty OS dia mitazona kaonty latsaky ny 10% amin'ny varotra US
OUKITEL C15 Pro: Ny finday avo lenta vaovao miaraka amin'ny notch miendrika rano mitete iray